गाडी गुड्दै गर्दा फेरी खस्यो यति ठुलो ढुङगा, नारायणगढ मुग्लीन सडकमा हेर्नुहोस् ! (भिडियोसहित) – Khabar28media
गाडी गुड्दै गर्दा फेरी खस्यो यति ठुलो ढुङगा, नारायणगढ मुग्लीन सडकमा हेर्नुहोस् ! (भिडियोसहित)
गाडी गुड्दै गर्दा फेरी खस्यो यति ठुलो ढुङगा, नारायणगढ मुग्लीन सडकमा हेर्नुहोस् ! (भिडियोसहित) अन्तिममा छ पुरा हेर्नुहोला !! काठमाडौं ।
मुलुकभर पछिल्लो २४ घण्टामा २ हजार २३९ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा ११ हजार ३१३ जनाको आरटी–पीसीआर र
एन्टिजेन परीक्षण गर्दा २ हजार २३९ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो । मन्त्रालयका अनुसार ६ हजार ६५७ जनाको आरटी पीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्दा १ हजार ४७९ जना र ४ हजार ६५६ जनाको एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा ७ सय ६० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो ।
योसँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको कुल संख्या ६ लाख ९५ हजार ८८ पुगेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा १ हजार ३१६ जना कोरोनामुक्त भए, २० को मृत्यु कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमणबाट पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर १ हजार ३१६ जना निको भएर घर फर्किएका छन् ।
योसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणमुक्त हुनेहरुको संख्या ६ लाख १६ हजार ९२९ पुगेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर ११ हजार ३१३ जनाको पीसीआर–एन्टिजेन परीक्षण हुँदा हालसम्म कुल ३६ लाख ३० हजार ६१७ जनाको पीसीआर–एन्टिजेन परीक्षण भएको छ । यसै गरी पछिल्लो २४ घण्टामा थप २० संक्रमितको मृत्यु भएको छ ।
Previous Article ब्रिटिस आर्मी र सिंगापुर पुलिसमा भर्ती हुन चाहने नेपालिहरुलाइ आयो खुसिको खबर
Next Article बुवा साउदीको हस्पिटलमा, आमा पोईला गएपछी नावालकहरूको बिजोक, यी सानी नानीको कुराले रोकीएन आँशु !!(भिडियो)